ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် သူမနဲ့ သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Maythadin
May Thadin | August 23, 2021 | Celebrity | No Comments
ဖြူဖြူထွေးကတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ်အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူထွေးကတော့ မိသားစုလိုက် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ အလှူအတန်းတေ့လည်း ရက်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်များကလည်း ချစ်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမ တည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်. .. အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း တရားသောဘက်နှင့် မတရားသောဘက်ကို လူသားချင်းသိတတ်စွာဖြင့် သိတတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲထဲမှာ ဖြူဖြူထွေးကတော့ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြန် ပါတယ်။
မကြာမှီရက်တစ်ရက်မှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် ပြည်သူတွေအတွက် အအေးဗူးတွေ ထွက်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမအပေါ်မှာ ချစ်တဲ့အချစ်တွေအစား ဝေဖန်မှုတွေသာ တိုးနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရင်းနဲ့ပဲ ရန်ကုန်မှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်း မ ကြာခင်မှာတော့ သူမတို့နေထိုင်တဲ့ နယ်ကိုပဲ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးကို လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကလည်း တင်လာခဲ့ပြီးနောက် အလှူအတန်းဆို ရက်ရောတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုလေးတွေတော့ အမြဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါ တယ်။
သူက တော့ ဒါတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယခု ဆိုရင် လဲ မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ် ရောဂါ များ ဖြစ်ပွားနေပြီး အနုပညာ တော်တော်များများလဲ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေး ဟာ ဆိုရင်လဲ သူ ကိုဗစ်ကူးဆက် ခံ နေရကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလာပါတယ်။
ဘယ်တုန်းက ကူးစက်ခဲ့ပြီး ဘယ်လောက်ကြာပီ ဆိုတာကတော့ မပြောပြခဲ့ပါဘူး။မြန်မာ ပြည်တွင်းနေထိုင်ကြတော့မိဘပြည်သူ များလဲ ကိုဗစ်ရောဂါ ဆိုးကြီးက နေ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဗစ္တတိယလွိုင္းေၾကာင့္ သူမနဲ႕ သူမရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြအားလုံးခံစားေနရတဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး
ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးေလးေတြနဲ႕ေၾကာ္ျငာေတြကို ရိုက္ကူးၿပီးပရိသတ္အခ်စ္ေတြကို ရယူထားနိုင္သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္. . ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့ မိသားစုလိုက္ ရိုးသားျဖဴစင္ျခင္းေတြနဲ႕အတူ အလႉအတန္းေတ့လည္း ရက္ေရာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပရိသတ္မ်ားကလည္း ခ်စ္ေပးခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။
နိုင္ငံေရးမ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေထြးတစ္ေယာက္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္. .. အႏုပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း တရားေသာဘက္ႏွင့္ မတရားေသာဘက္ကို လူသားခ်င္းသိတတ္စြာျဖင့္ သိတတ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႕အတူရပ္တည္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အဲထဲမွာ ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ျပန္ ပါတယ္။
မၾကာမွီရက္တစ္ရက္မွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေထြးတစ္ေယာက္ ျပည္သူေတြအတြက္ အေအးဗူးေတြ ထြက္ၿပီးကမ္းလွမ္းခဲ့ေပမဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ သူမအေပၚမွာ ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြအစား ေဝဖန္မႈေတြသာ တိုးေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ေဝဖန္မႈေတြ ခံေနရင္းနဲ႕ပဲ ရန္ကုန္မွာဆက္လက္ေနထိုင္ရင္း မ ၾကာခင္မွာေတာ့ သူမတို႔ေနထိုင္တဲ့ နယ္ကိုပဲ ျပန္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ျပန္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အားလုံးကို လြမ္းေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကလည္း တင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အလႉအတန္းဆို ရက္ေရာတတ္တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြးတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူမ တတ္နိုင္သေလာက္ လႉဒါန္းမႈေလးေတြေတာ့ အၿမဲျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါ တယ္။
သူက ေတာ့ ဒါေတြကိုဂ႐ုမစိုက္ပဲ ေထာက္ပံ့မႈေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ယခု ဆိုရင္ လဲ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုဗစ္ ေရာဂါ မ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး အႏုပညာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖဴျဖဴေထြး ဟာ ဆိုရင္လဲ သူ ကိုဗစ္ကူးဆက္ ခံ ေနရေၾကာင္း ပရိတ္သတ္ေတြကို ေျပာျပလာပါတယ္။
ဘယ္တုန္းက ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာပီ ဆိုတာကေတာ့ မေျပာျပခဲ့ပါဘူး။ျမန္မာ ျပည္တြင္းေနထိုင္ၾကေတာ့မိဘျပည္သူ မ်ားလဲ ကိုဗစ္ေရာဂါ ဆိုးႀကီးက ေန အျမန္ဆုံးကင္းေဝးၾကပါေစလို႔ ပရိသတ္ႀကီးနဲ႕အတူ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုံးဝမပါဘဲ အန္တရာယ်တွေကြားက လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးတာမို့ အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မီးနို…
၃၂နှစ်လုံးပစ်ထားခဲ့ပြီး သားလေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖုန်းဆက်စုံစမ်းလာတာတွေကို နာကျည်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင်
ထွက်သွားတဲ့သူထက် ကျန်ခဲ့ရတဲ့သူကပိုနာကျင်ရတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ရေမွန်ရဲ့ကောင်မလေး
Boycottလုပ်ထားခံရ‌ပေမယ့်လည်း မန်ကျည်း ရွက်အခူးပြပြီး လိုင်းပေါ်ပြန်တတ်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဒီကာလမှာ ခက်ခဲလို့ မင်းသမီးတွေအိမ် ဆန်လေးသွားရောင်းတာ အားမပေးတဲ့အပြင် အိမ်ထဲတောင်ပေးမဝင်လို့ ငိုကြွေးနေတဲ့ ကျော်ထူး
“ပထွေးဖြစ်သူက ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိသတ်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေး”
သားကြီးလေးရဲ့ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် စားသောက်ကုန်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သဇင်
မြိုင်ရေ သမီးကောင်လေးကိုသိန်း၂၀ ပေါင်ချင်လို့ပါဆိုပြီး သရုပ်ဆောင်မေမီကိုကို ကိုစနောက်လိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလို သာသနာပြုရန်အတွက် iphone 13 pro 1TB လှူဒါန်းရန် အလှူခံလာတဲ့ ဆရာတော်ဘုရား
ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်